> Resource> iTunes> Easily Nyefee iTunes Playlist ka iPad
Ehichapụ playlist na gị iPad accidently, dị ka iPad Obere, na chọrọ iṅomi iTunes playlist ka iPad? Ọ bụrụ na ndị listi ọkpụkpọ na gị iPad na-kpam kpam ahụ dị ka ndị na-iTunes Ọbá akwụkwọ, i nwere ike inwe ha azụ site syncing gị iPad na iTunes. Ọ bụrụ na, ị ga-atụfu gị iPad playlist mgbe ị mmekọrịta gị iPad na iTunes. Ọ bụ manụ, ọ bụghị ya?
N'ezie, nyefee playlist si iTunes ka iPad, m ukwuu nwere ike ikwu na ị na a ọkachamara iTunes ka iPad transfer - Wondershare TunesGo (Windows). Nke a na usoro-ahapụ gị bụghị nanị nyefee iTunes playlist gị iPad, ma na-aga omume. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị hapụ iTunes n'ọbá akwụkwọ site na mberede, a usoro-enyere gị aka wughachi ya site na-akpụ akpụ music na playlist si iPad ka iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ka mma.
2 nzọụkwụ idetuo playlist si iTunes ka iPad
Ndị na-esonụ akụkụ-egosi na ị mfe nzọụkwụ na-esi mbubata iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPad na gị Windows kọmputa. Biko download a iTunes ka iPad nyefe. Ahụ na-aga site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPad na PC mgbe launching a usoro
Na-amalite na, malite a usoro na kọmputa gị mgbe na nbudata na wụnye ya. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad gị na kọmputa. Ka anya dị ka ha na-njikọ, a usoro ga-chọpụta gị iPad na mgbe ahụ na-egosipụta ya ke akpan window.
Cheta na: Biko ibudata ma wụnye iTunes na kọmputa gị tupu akpụ akpụ playlist si iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPad.
Nzọụkwụ 2. Nyefee playlist ka iPad
Na ekpe kọlụm, pịa "Playlist" taabụ. Mgbe playlist windo na-egosi na nri Panel, ị kwesịrị ị na pịa obere abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye". Họrọ "Tinye iTunes playlist". Nke a na-elu a obere iTunes playlist window. Site ndabara, niile listi ọkpụkpọ na-ticked apụ. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ mbubata ụfọdụ, uncheck gị achọghị listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, pịa "OK".
Ọ bụ ya! Ọ dị mfe nyefee iTunes listi ọkpụkpọ iji iPad, ọ bụghị ya?
N'ezie, Wondershare TunesGo bụ n'ezie a bara uru ma dị ike omume. Ọ bụrụ na ị zọpụta ọtụtụ songs na listi ọkpụkpọ na kọmputa gị, ị nwekwara ike mbubata ndị a music na listi ọkpụkpọ gị iPad. Ke adianade do, a usoro ike gị mbubata music, videos, foto na kọntaktị site na kọmputa gị iPad. Ugbu a, ibudata a omume na-ahụ ihe salient atụmatụ banyere ya!
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPad Obere, iPad Air, iPad na Retina ngosi, The New iPad, iPad 2 na iPad, mgbe ndị a na iPads na-agba iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9.